၎င်း​ကျောင်းအုပ်​သည်​ ​မေလအတွင်းကလည်း ​ကျောင်းဝင်​​ကြေး ၅၀၀ ကျပ်​စီ ​ကောက်​ခံခဲ့​ကြောင်း၊ ​အောက်​တိုဘာ၂၄တွင်​စစ်​​ဆေးခဲ့သည့်​ စာ​မေးပွဲအတွက်​ စာ​မေးပွဲ​ကြေး ၈တန်း၊၁၀တန်း ၁၅၀၀ ကျပ်​၊ အခြားအတန်းများအား ၁၀၀၀ ကျပ်​ အသီးသီး​ကောက်​ခံခဲ့​ကြောင်း၊ ပညာသင်​​ထောက်​ပံ့​ကြေး ၄၂၈​ယောက်​အတွက်​ ၄၁၂၀၀၀ရရှိခဲ့​သော်​လည်း ​ကျောင်းသားများသို့ ထုတ်​​ပေးမှု မရှိခဲ့​ကြောင်း သိရသည်​။ ​ငွေအလွဲသုံးစားလုပ်​သည်​သာမက ​ကျောင်းကိုလည်း ဂရုမစိုက်​ပဲ​နေရာ သီတင်းကျွတ်​​ကျောင်းပိတ်​ရက်​ကုန်​ဆုံး​သော်​လည်း အဆိုပါ​ကျောင်းမှာ ပိတ်​မြဲပိတ်​ထားသည့်​အတွက်​ မိဘများအ​ရေးဆို​သောအခါမှသာ ​ကျောင်းဖွင့်​ခဲ့ရသည်​ဟု ဆိုသည်​။ ​အောက်​တိုဘာအစည်းအ​ဝေးတွင်​ ၎င်းက အိမ်​အလုပ်​များ​နေ၍ ​ကျောင်းဖွင့်​​နောက်​ကျခဲ့ရသည်​ဟု ပထမတွင်​ ​တောင်းပန်​စကားဆိုခဲ့​သော်​လည်း ၈တန်းမိဘတစ်​ဦးက ပြည်​နယ်​စစ်​ဖြစ်​လာပါက ဆရာကြီးတာဝန်​ယူထားတဲ့ မြန်​မာစာဘာသာ သင်​ရိုးအလွန်​နည်းပါးသည့်​အတွက်​ ​ကျောင်းသားများမည်​သို့ ​ဖြေဆိုရမည်​နည်းဟူ​သော အ​မေး​ကြောင့်​ မိဘများအား ပြဿနာရှာမည်​ဆိုလျှင်​ ဤ​ကျောင်းသို့မလာကြနဲ့ဟု ​ဒေါသဖြင့်​မ​ချေမငံ​ပြောဆိုခဲ့​ကြောင်းလည်း သိရသည်​။ အဆိုပါ​ကျောင်းအုပ်​ဆရာကြီးမှာ ဦး​ကျော်​ထွန်းလှ ဖြစ်​ပြီး ယခုအခါဆရာမကြီး​ဒေါ်မဲမညိုက တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​လျှက်​ရှိ​ကြောင်း၊ တိတ်​တဆိတ်​လွှဲ​ပြောင်းလက်​ခံပြုလုပ်​ခဲ့ကြ​ကြောင်း သတင်းရရှိသည်​။ မိဘဆရာအသင်းနာယကတစ်​ဦးကလည်း “ဆရာမကြီးလည်း မပွင့်​လင်းဘူးဆိုရင်​ ဒါမရိုးမသားလုပ်​ထားလို့ပဲ၊ သူတို့ဖက်​က ပွင့်​လင်းမြင်​သာစွာ ချပြလာရင်​ မိဘ​တွေကလည်း ​ကျောင်းအတွက်​ အ​ကောင်းဆုံး​ပေးဆပ်​သွားမှာပါ” ဟုဆိုသည်​။ အဆိုပါ​ကျောင်းသည်​ ၄မိုင်​ရပ်​ကွက်​တွင်​တည်​ရှိပြီး ​ကျောင်းသား ၁၀၀၀ နီးပါးရှိကာ ဆရာ/မ ၂၃ ​ယောက်​သာရှိ၍ စာသင်​ခန်းမလုံ​လောက်​မှု၊ စာ​ရေးခုံမလုံ​လောက်​မှုနှင့်​ ဆရာအင်​အားနည်းပါးမှုတို့နှင့်​ ကြုံ​တွေ့​နေရ​ကြောင်းသတင်းရရှိသည်​။ မောင်​မျက်​ပွင့်​ ( ယိုးမြီ )
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← ငလုံးရခိုင်​သတင်းစုစည်းမှူ (v4.0)